सार्वजनिक यातायातलाई कसरी सुरक्षित बनाउने ? १९ बुँदामा डा. रवीन्द्र पाण्डेको सुझाव सरकारले एकातर्फ परीक्षणको दायरा साँघुरो गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ एकैपटक सार्वजनिक यातायात खुलाउने निर्णय गरेको छ । समुदायमा संक्रमण छ कि छैन भनेर न्यूनतम २ प्रतिशत जनसंख्याको पीसीआर टेस्ट गरेपछि प्राप्त परिणाम अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको निर्णय गर्नु सुरक्... पूरा पढ्नुहोस्
रक्सीको ह्याङओभरले दिन बिगार्यो ? यसरी हटाउनुस् कहिलेकाहीँ पार्टीमा बढी नै रक्सी पिउँदा भोलिपल्ट बिहान टाउको भारी भएको अनुभव हुन्छ । छटपटी जस्तो हुने अनि बान्ता आउला जस्तो हुने स्थितिलाई ह्याङओभर भनिन्छ । खासमा पार्टीमा धेरै मात्रामा वा फरक फरक किसिमका रक्सी पिउँदा बिहान ह्याङओभर हुन्छ । यस स्थितिमा एल्डोस्ट... पूरा पढ्नुहोस्
खोप नलगाएका बालबालिका खोज्न स्वयंसेविका परिचालन झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रका पूर्ण खोप नलगाएका बालबालिकालाई खोज्न स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरेको छ । नगरका १५ वटा वडामा २ हजार ७६४ बालबालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ प्रकारका रोगविरुद्ध अनिवार्य खोप लगाउनुपर्नेमा ४१ जना छुटेको स्वास्थ्य शाखाका... पूरा पढ्नुहोस्
दिनदिनै एक चम्चा मह खाँदा हुनेछन् फाइदै फाइदा ​शताब्दियौंदेखि महको प्रयोग महत्त्वपूर्ण औषधिका रूपमा भइरहेको छ । यसको सेवनले स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निर्मूल पार्छ । सुन्दरता बढाउन समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । महका फ्याट, कोलेस्ट्रोल र सोडियम हुनाले यसले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ । यसमा एन्टीसेप्टिक, एन्टी... पूरा पढ्नुहोस्
जडीबुटीको राजा हो शिलाजीत, यसका अनेकौं फाइदाबारे जान्नुस् नेपालका पहाडहरूमा पाइने जडीबुटीमा शिलाजीतको विशिष्ट स्थान छ । आयुर्वेदमा शिलाजीतको खुब प्रशंसा गरिएको छ र यसलाई जडीबुटीहरूको राजा मानिएको छ । बलपुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक र पौष्टिक गुण शिलाजीतमा पाइन्छ । रोगीको रोग हटाउनका लागि मात्र नभई स्वस्थ व्यक्तिका ला... पूरा पढ्नुहोस्
पानीमा नून हालेर नुहाउनुस्, अनि चामत्कारिक फाइदा पाउनुहोस् नून नहालेको दाल तरकारी खान मुश्किल पर्छ । तर खानाको स्वाद बढाउन बाहेक नुहाउँदा पनि नूनको उपयोग हुन्छ । नुहाउने पानीमा नून हाल्दा अनेकौं रोग भाग्छन् । यसले संक्रमणहरूलाई पनि निको पार्छ । ज्वरो आउँदा तपाईं सीधे नून मनतातो पानीमा हालेर नुहाउनुस् । एक बाल्टिन... पूरा पढ्नुहोस्
के कोभिड- १९ कमजोर बन्दै गएको हो ? हावाबाट कस्तो अवस्थामा सर्छ कोरोना ? कोरोना संक्रमण संसारकै लागि नयाँ रोग हो । कोभिड- १९ (कोरोनाभाइरस)को स्वरूप, यसको स्वभाव, रोग सर्ने तरिका, लक्षण, निदान, उपचार तथा रोकथाम हाम्रा लागि सर्वथा नयाँ विषय हुन् । नोबेल कोरोनाभाइरस विगत ६ महिनाअघि मात्र देखिएको हुँदा यसबारे निकै कम अध्ययन तथा अ... पूरा पढ्नुहोस्
१६ मिनेट मात्र कम सुत्दा पनि स्वास्थ्यमा पर्छ असर ! कार्यालयमा राम्ररी काम गरेर दिन बित्छ र स्पष्ट दिमागका साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ कि तनाव र व्याकुलताका कारण खराब दिन बिताउनुहुन्छ ? यी दुई परिस्थितिमा जम्मा १६ मिनेटको निद्राको अन्तर हुन्छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययनमा यही कुरा देखिएको छ । स्लीप हेल्थ नामक जर्... पूरा पढ्नुहोस्
अध्ययन भन्छ- स्वस्थ दूधले बच्चामा मोटोपनको जोखिम कम हुन्छ स्वस्थ दूध पिउने बच्चाहरु बोसोयुक्त अर्थात चिल्लो पदार्थ बढी भएको दूध पिउनेहरूको तुलनामा बढी वजन अर्थात मोटोपनको संभावना कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले “होल मिल्क” अर्थात् स्वस्थ दुध पिएका बच्चा कम तौल अर्थात मोटोप... पूरा पढ्नुहोस्
याे उमेरमा पनि फिट छन् अमिताभ, यस्ताे छ राज तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि ७७ वर्षको उमेरमा पनि अमिताभ बच्चन कसरी यतिधेरै सक्रिय र फिट भए ? यसो हुनुको कारण वर्कआउट र डाइटिङ नै हो । फिटनेस ट्रेनर तथा डाइटिसियन वृन्दा मेहताले अमिताभलाई दैनिक वर्कआउट गराउँछन्। अमिताभ जब २५ वर्षका थिए, त्यसताका उनी दैनिक ८ देख... पूरा पढ्नुहोस्
नागरिकले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलौं, सेल्फ लकडाउनमा बसौं – डा. रवीन्द्र पाण्डे काठमाडौं उपत्याकामा ४० लाख जनसंख्या छ । जनघनत्व बढी भएका सहर कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्ने जोखिममा छन् । सरकारी तथ्यांकमा देखिएको संक्रमितको संख्यालाई हामीले स्याम्पलिङको रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा अन्य उपचार गर्न गएका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रम... पूरा पढ्नुहोस्
नेपालमा भेन्टीलेटर बैंकको सेवा सञ्चालनमा सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जुधिरहेको वर्तमान अवस्थामा कोभिड-१९ प्रकोपले महामारीको रुप लिंदै गर्दा अति आवश्यक पर्ने भेन्टीलेटर लगायतका सघन उपचारका उपकरणहरु सहज र सुलभ माध्ययमबाट उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ नेपाल भेन्टीलेटर सर्भिसको शुरूवात भएको छ ।... पूरा पढ्नुहोस्
थाहा पाउनुस् काखीको दुर्गन्ध हटाउने घरेलु उपाय गर्मीको मौसममा पसिना चुहिएर काखी गनाउन थाल्छ । यस्तो भयो भने कोही पनि हामी नजिक बस्न चाहँदैन । काखीको गन्ध हटाउन डियोड्रेन्टको प्रयोग गरिन्छ तर त्यसले पनि सधैंभरि गन्ध हटाउँदैन । यहाँ हामी केही घरेलु उपाय बताउँदै छौं। जसले काखीको गन्ध सजिलै हटाइदिन्छ । बेकिङ ... पूरा पढ्नुहोस्
यसकारण काठमाडौं उपत्यकामा काेराेनाकाे जोखिम बढ्यो- डा. रवीन्द्र पाण्डे -संक्रमित जिल्लाबाट विभिन्न भित्रि बाटो हुँदै हजारौं व्यक्ति काठमाडौं आइरहेका छन् | उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छैन। -काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा उपचार तथा शल्यक्रिया गर्नुपूर्व पीसीआर टेस्ट गर्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ।... पूरा पढ्नुहोस्
ज्वरो आउँदा यसरी गर्नुस् स्वास्थ्यको हेरचाह सामान्य भाषामा शरीर सामान्य तापक्रमभन्दा बढी तातो भयो भने ज्वरो आएको भनिन्छ । शरीरको तापक्रम स्थिर हुन्छ । धेरैले ज्वरोलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । आज ज्वरो आयो भने भोलि ठीक होला भनेर स्वास्थ्य चौकी जाँदैनन्, केयर पनि कम गर्छन् । तर, यसो गर्नुहुँदैन । एक्कासि शरीरको तापक्रम... पूरा पढ्नुहोस्
बिहान २० मिनेट मात्र बढी सुत्नु पनि स्वास्थ्यका लागि लाभदायक अचेलको व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूले राम्ररी निद्रा पु–याउन पनि पाउँदैनन् । केही मानिस त साना झप्कीमै निद्रा पूरा गर्छन् । केही अन्य चाहिँ हप्तामा एक दिन छुट्टी हुँदा दिनभरि सुत्छन् । प्रत्येक व्यक्तिका लागि कम्तीमा आठ घन्टाको निद्रा आवश्यक हुन्छ । निद्रा... पूरा पढ्नुहोस्
के कोरोना भाइरस चमेरोले मानिसमा सारेको हाे ? यसाे भन्छन् वैज्ञानिक अहिले विश्व काेराेना भाइरसबाट आक्रान्त छ। चीनकाे वुहान सहरबाट देखिएकाे भनिएकाे याे भाइरसबाट बच्न अहिलेसम्म खाेप बनिसकेकाे छैन।काेराेना जीवजन्तुबाट मानिसमा सरेकाे बताइन्छ । तर कुन जीवबाट सरेकाे हाे भनेर अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। टेक्सस ... पूरा पढ्नुहोस्
यी ६ लक्षणलाई नगर्नुस् बेवास्ता, हुन सक्छ पत्थरी ​पत्थरीको समस्या आजकल धेरैजनालाई हुने गर्छ । मिर्गौलामा पत्थरी भएपछि असहनीय पीडा हुन्छ । गलत खानपिन र कम पानी पिउने बानीले पत्थरी हुन्छ । पत्थरी हुनुअघि शरीरले विभिन्न संकेतहरू दिन थाल्छ । तर मानिसहरू त्यसलाई बेवास्ता गरिबस्छन् । यहाँ हामी केही त्यस्ता संकेतका बार... पूरा पढ्नुहोस्
जिम गएर मात्र केही हुँदैन, अनिवार्य खानुहोस् यी पाँच खानेकुरा जिममा गएर तपाई घण्टौं पसिना बगाउनुहुन्छ । तर यदि तपाई यी ५ खानेकुरा खानुहुन्न भने त्यो सबै बेकार हुन जान्छ । यदि तपाई स्वस्थ्य रहन चाहनुहुन्छ भने जिम जानुका साथ साथै नियमित यी ५ खानेकुरा पनि खाने गर्नुहोस् । जौं फिट र हेल्दी रहनु छ भने फाइबर आवश्य... पूरा पढ्नुहोस्
पिपलको पातले यी ५ गम्भीर रोगका लागि औषधिको काम गर्छ हाम्रो समाजमा पिपलको पूजा गरिन्छ । धार्मिक विश्वासअनुसार लक्ष्मीको श्रापका कारण विष्णु भगवानले एकपटक वनश्पती बन्नु परेको थियो । जहाँ उनी पिपल बनेर जमिनमा उम्रिएका थिए । तर वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि पिपलको महत्व कम छैन । यो मात्रै यस्तो बनस्पती हो, जो २४ घण्टा अक्सिजन ... पूरा पढ्नुहोस्
नक्कली भाञ्जा बनाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण: चिकित्सकसहित १२ पक्राउ, पूर्वप्रहरी रहेका व्यक्ति विचाैलिया कानूनमा मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि आफ्नै नातेदार चाहिन्छ। अन्य व्यक्तिको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेमा मानव बेचबिखनअन्तर्गत मुद्दा चल्छ। उक्त मुद्दा आकर्षित हुने गरी ललितपुरका एक व्यक्तिको मिर्गाै...